बिहेअघि नै यौन सम्बन्ध राख्न खोज्दा ब्वाइफ्रेण्डले मानेनन्, हनिमुनमा महिलाको होस उड्यो, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
बिहेअघि नै यौन सम्बन्ध राख्न खोज्दा ब्वाइफ्रेण्डले मानेनन्, हनिमुनमा महिलाको होस उड्यो
काठमाडौं। एक महिलाले चर्चित सामाजिक संजालमा एक पोस्ट लेख्दै आफ्नो पीडा बताएकी छिन् । महिलाका अनुसार उनको विवाह केही समय अगाडि मात्र भएको हो । महिलाले विवाहभन्दा अगाडि नै उनका ब्वाइफ्रेण्डसँग यौन सम्बन्ध राख्ने प्रस्ताव गरेकी थिइन् तर उनका ब्वाइफ्रेण्डले मानेका थिएनन् । महिलाले पटक पटक प्रस्ताव गरे पनि ब्वाइफ्रेण्डले मान्दैनथे । त्यतिबेला उनलाई केही पनि अस्वभाविक लागेको थिएन । तर, जब यो जोडी बिहेपछि हनिमुनमा गए त्यसपछि यस्तो रहस्य खुल्यो कि महिलाको होस उड्यो । अहिले महिलाले आफूमाथि ठूलो धोका भएको महसुस गरिरहेकी छिन् । उनले बुझ्न सकिरहेकी छैनन् कि अब के गर्ने ।
२७ वर्षकी यी महिलाको विवाह ३२ वर्षका एक व्यक्तिसँगै भर्खरै भएको हो । महिलाले हनिमुनबाट फर्किएको केही घण्टामै आफ्नो पीडा पोस्ट गरेकी हुन् । रेडिट नामको सामाजिक संजालमा उनले लेखेअनुसार करिब १ वर्षको प्रेम सम्बनधपछि उनीहरुले विवाह गरेका थिए । महिलाका अनुसार ५ महिनाको डेटिङपछि उनीहरुले इंगेजमेन्ट गरेका थिए र ६ महिनापछि उनीहरुको विवाह भएको थियो । उनका अनुसार बिहेअघि उनी जहिले पनि आफ्नो हुनेवाला पतिसँग सेक्सको बारेमा कुरा गर्थिन् उनका ब्वाइफ्रेण्ड सधैं यही भनेर टार्थे कि ‘म पुरानो सोचाइको छु र मैले बिहेभन्दा अगाडि यूतो गर्नु ठिक मान्दिन ।’
महिलाले कैयौं पटक कोसिस पनि गरेकी थिइन् तर ब्वाइफ्रेण्डले हरेक पटक उनको प्रस्ताव टार्थे । हिलाका अनुसार उनी धार्मिक स्वभावका त थिएनन् तर पटक पटक आफू पुरानो सोचकोभ न्दै कुरा टार्थे र महिलाले उनको कुरा मान्थिन् । महिलाले उनको कुरामा विश्वास गरेकी थिइन् तर उनको विश्वास त्यतिबेला टुट्यो जब उनीहरु बिहेपछि हनिमुन गए । हनिमुनको पहिलो रातमै महिलाको होस उड्यो किनकि उनका पतिको गुप्तांग निकै सानो थियो । त्यतिबेला बल्ल उनले थाहा पाइन् कि उनी बिहेअघि सेक्सको लागि किन तयार हुँदैनथे । महिलाले आफ्नो पोस्टमा लेखेकी छिन् कि उनी आफ्ना पतिलाई लज्जित बनाउन चाहन्न तर उनले बुझ्न सकिरहेकी छैन् कि पतिसँग यसबारेमा कसरी कुरा गर्ने ? महिलाले लेखेकी छिन् ‘मैले उसलाई लज्जित महसुस हुनुपर्ने केही भनेकी र गरेकी छैन तर पनि मलाई लागिरहेको छ कि कसैले जानीजानी मलाई धोका दिएको छ ।’